Adaba Mobile enyi na enyi na mobile na-anabata ozi ịntanetị | Martech Zone
Adaba Mobile Enyi na Mobile anabata ozi ịntanetị
Friday, May 17, 2013 Thursday, June 18, 2015 Douglas Karr
Anyị na-agwa gị gbasara gị ozi-e-enyi na enyi ma ị naghị ege ntị! Ekwentị mkpanaka email na-agụ akwụkwọ na-agbawa - n'ezie gafee desktọọpụ email agụ.
Yabụ kedu ihe ị na - emelite emelite email gị ka ọ bụrụ enyi na enyi? Enweghị ndị ngọpụ, Ndị mọnk Email na-eweta ọrụ ugbu a ebe ị nwere ike ime ka onye mmebe gị zipu foto Photoshop ma ha ga-arụ nnukwu ọrụ na ịmepụta ihe email na-anabata nke na-adị mma na ngwaọrụ mkpanaaka. Ma ikwenyeghi na ịchọrọ otu? Nke a bụ ihe omuma ha (pịa-maka ụdị mmekọrịta):
Tags: email mọnkemail mkpanakaemail na-anabata ozi ịntanetịemail-enyi na enyiozi ịntanetị
Tinye Nkọwa na Vidio Youtube gị
Mee 20, 2013 na 7: 53 AM
Ezi Ama. Mana onye ozo nwere onye ji aka ekpe abuo puputa? OO
Mee 20, 2013 na 1: 24 PM
Ebee ka m furu uche aka ekpe?
Mee 21, 2013 na 9: 24 AM
Onye mọnk niile n ’ala na - agbatị aka nri ya mana isi mkpịsị aka ya dị n’akụkụ aka ya ma ọ bụ aka ya bụ aka ekpe, ọ bụghị aka nri. 🙂
Mee 21, 2013 na 10: 16 AM
Oh! Amaghịdị m nke ahụ!